Creative Writing » မွေးမေလေ့ နဲ့ သိမ်းထုတ်သေချာ	36
ဆိုတော့ သူတို့ အစွန်းရောက် ၂ ယောက် ကိုယ်ကတော့ မျှတတယ်လို့ (ကွကိုယ် ထင်တာပဲ) ………….
နင် တို့ နဲ့ ဆို ငါ့ ကော်ဇော က ခြေသုတ်ဖုံဖြစ်မှာတဲ့ဗျာ။ အမှန်ပါပဲ။ နင်းကောင်းကောင်းနဲ့ နင်းကြတာ။ ကိုယ်တွေ မှာ ဖုန်စုတ်စက်ဆိုတာ အဲဒီတုန်းက မကြားဖူး မမြင်ဖူးတော့ ကော်ဇောကို သန့်အောင် လုပ်ဖို့ ဆိုတာ လျှော်ဖို့ ဆိုတာ အင်မတန် မလွယ်တာပါ။ ဖုန်ပေါတဲ့ ဒေသ နိုင်ငံ မို့ ကော်ဇောက ဖုံတွေကို စုတ်ယူ စုယူထားတယ် ဆိုပြီး ဝယ်ကို မဝယ်တာ။
မီးသွေးတော့မသိဘူးးးး၊ သံပုရာသီး ကတော့ ဟုတ်တယ်။ အနံ့ကို စုပ်သွားတာ ဒူးရင်းသီးထည့်ထားပြီး တောင် တစ်ရက်အတွင်း အနံ့ပျောက်သွားရော။
မပြီးသေးပါဘူးး အဟင့်။ မယ်တော်ကြီး ဂမုန်း တို့ ဘာဂမုန်း ညာဂမုန်း ရှိသမျှ ဂမုန်းရွက်ဖုန်တင်တာတွေကိုပါ ရေဝတ်နဲ့ လိုက်သုတ်ရတာပါ။
ဗမာလိုဆို ဂါလာဂုနိ ခေါ်သလား၊ ပုလင်းခွံ အိတ်ခွံသည်လို့ ခေါ်သလားးး ??? သူမို့ ရှာရှာဖွေဖွေ ပေါင်းတယ်။ အဲဒီ တစ်မိသားစု၊ ဒါမှ မဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က လာကောက်ပါပြီ။
အောင် မိုးသူ says: စုံဆန်စိနေတာပဲ အဲသည်အလုပ်ဟာ ပြောသာပြောတယ် အလွန်ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဘာလို့ဆို ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်နေတာလေ။ အိမ်မှာတော့ တစ်ရက်ရှင်းပဲ။ တစ်ရက်ရှင်းဆို တစ်ရက်ရှင်းပြီးရင် နောက်တစ်ရက် ထပ်ရှုပ်လို့လေ။ မေမေက အရင်က စက်ချုပ်တော့ ပိတ်စအစအန အိတ်တွေ တစ်ပုံကြီး။ လွှင့်ပစ်ပါဆိုလည်း မပစ်ဘူး။ အဲပိတ်စတွေကို စပ်ချုပ်ထားတဲ့ ခြင်ထောင် စောင်တွေ တစ်ပုံကြီး။ တိုလီမုတ်စဆို ပွထနေတာ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျမှသာ မကြီးပြောသလို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်တော့မယ် ခုတော့ စုပေါင်းနေနေရတာမို့။
ခင်ဇော် says: တစ်ပတ်လောက်များ ပုံမိရင် ရှင်းရတာ ပိုဆိုးးး
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ဒါတော့ တော်တယ် စလုံးက။ ဒါပေသိ သူ့နိုင်ငံကလည်း ကျဉ်းတာကိုး။
ခင်ဇော် says: လုပ်ပေးချင်စိတ် ရှိတဲ့ စေတနာရှိတဲ့ အစိုးရဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတာပါကွယ်။
Ma Ma says: တော်တော်စည်းစနစ်ရှိတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာတော့ နှမျောတသတွေချည်းရွတ်ပြီး ဘာမှမပစ်ရက်လို့ ကြွက်သိုက်ကအရှုံးပေးရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: လွှင့်ပစ်ရမှာ နှမြောရင် သများက တော့ ရောင်းပစ်တာပဲ။
Ma Ma says: (သူတို့ ဒိုနေးရှင်းပုံးထဲထည့်ရင် သူတို့ ရဲ့ ဘရန်းဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ ဒေါ်လှ ၁၀ သို့ ၂၀ ဘောက်ချာပြန်ပေးတယ်။)
အဲဒီနည်းသဘောကျတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
Mike says: .ဒီတခါ ကေဇီပြန်လာရင် အိမ်ရှင်းဖို့ငှားရမယ်..ကျုပ်အိမ်ကတော့ မအူကုန်အမှိုက်ပုံမှာအိမ်လုပ်နေသလိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: လာရှင်းပေးမယ်။
တောင်ပေါ်သား says: မိုင်မားသားကလည်း အဲသလို အပစ်သမား
အနော့ ရည်းစားဦးပြန်စာလေးတောင် ကလေး၃ကောင်ရနေမှ ဘာအလွမ်းသယ်နေစရာလည်းဆိုပြီး လွှင့်ပစ်သတဲ့ ၊
အဲ့သလောက် အပစ်ရက်စက်တာ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ပြောပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကေရေ မတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ဖတ်နေရသလိုပဲ။ အမလည်း အဲဒီလို အပစ်ကြမ်းတယ်။ ဒီ့ထက်တောင် ဆိုးသေးတယ်။ တီဗီ မကြည့်နဲ့ ပြောနေတာ ပြောမရလို့ တီဗီကို အမှိုက်ပုံ သွားလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အမ အမေနဲ့ အမ အကြီးအကျယ် ကွဲကြပြဲကြတာလည်း အဲဒီ အပစ်ကိစ္စပဲ။ သူက အမှိုက်ပုံထဲမှာ နေချင်တယ်။ အမက မျက်စိရှုပ်ရင် မရဘူး။ ပြီးတော့ အမ အပစ်ကြမ်းတာက သန့်ရှင်းမှုဦးစားပေးအတွက်တော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ မမှီ တို့လို မဟုတ်ဘူး။ တနေ့တနေ့ အဲဒီအမှိုက်တွေအတွက် အချိန်ပေးရတာ မတန်လွန်းလို့ပါ။ ခုထိ နေ့တိုင်း အိမ်ရှင်းရတာ တစ်ရက်ကို ၃နာရီလောက်ရှိတယ်။ ပစ္စည်း တစ်ခု လိုချင်ရင် ရှာလိုက်ရတာ။ အဲဒီဒဏ်ကို သီးမခံနိုင်တာ။ ဒါနဲ့ အကုန်ပစ်တယ်။ သြော် … ရှိတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ကလေးတွေတောင် လွှင့်ပစ်ချင်တာပါဆို။
​ဒေါ် လေး says: ကေဇီ ရေးထားတာ စုံလင်နေတာဘဲ
ခင်ဇော် says: ရှင်းပြီးရင်
weiwei says: အမလဲ အပစ်ကြမ်းတဲ့အထဲပါတယ် ..
ဦးကျောက်ခဲ says: သိမ်းထုပ်သေချာအကြောင်းကတော့ ပြောမပြောချင်ဘူး…
ခင်ဇော် says: ကျောက် ပြောတာ မျက်စေ့ထဲ မြင်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
Crystalline says: ကွန်​ကွန်​မ​ကောင်းလို့ ​နောက်​မှလာပစ်​မယ်​.. အခုမှသတိရ.. လိုက်​ကာ​လျော်​မယ်​ဆိုတာ.. ၅ပတ်​​လောက်​ရှိပြီ..​မေ့​နေတာ.. ဝဲတာက​တော့ ပက်​စက်​တယ်​.. အဝဲ​ကောင်းလို့.. စွန်​ကုပ်​ပဲ့လို့ ပြင်​မယ့်​.. ​လော့ကက်​​လေး.. ဘယ်​ဝဲမိမှန်းမသိတာ…
​နောက်​တခါသူများကိုမ​ပေးခင်​ ​သေချာစစ်​မှလို့ သတိထားတဲ့ကြား.. ပုတီး​လေးပါသွားပြန်​… အာ့​လေးက​တော့ပြန်​ရလို့​တော်​​သေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ရွဲ့တာလားး
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဒီလိုမိန်းမပီသတဲ့ယောက်ခမမျိုးမရလိုက်တာ နာတာပဲ။သားမရတော့လဲသမီးပေါ့ ချွိသများကိုလက်ခံမာလားငင် မွေးမေလေ့ကိုယောက်ခမတော်ချင်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ချစ်သဲ။
မြစပဲရိုး says: ဘုရားစင် ကြည့်ပြီး ယုံလိုက်ပါတယ် ဇီဇီ ရယ်။
ခင်ဇော် says: ဒါလေးပဲ ရှိတာ အရီးရေ။
padonmar says: အဲသလောက် မသိမ်းထုပ် မသေချာဖူးဘူး။
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်။ အဲဒါလေး နောက်တစ်ပို့(စ) မှာ အဆက်ရေးမလို့ အာတီဒုံ။
ခင်ဇော် says: ရှာရှာဖွေဖွေ သင်မသိသေးတဲ့အရာတွေ
ဂျက်စပဲရိုး says: အဟင့် သူ့ အိမ်ရှင်းတာ ကို ဖတ်ရရုံနဲ့တင် မောသွားတယ်။
တိတ်တိတ်ပုန်း မိန်းမ ရနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ဆိုပြီးတော့ :P :P :P
surmi says: ဒုက္ခ ဒုက္ခ
အစုတ်အဟောင်းတွေထဲက ပြန်သုံးလို့ရတာလေးတွေဘဲ တွေးပြီး ချီတုန်ချတုန်ဖြစ်နေပါရောလား ဒါမျိုးတွေက ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ဘဝပုံစံတွေနဲ့ အချိုးတူမယ်ထင်ပါရဲ့ ။
ကျုပ်အရှုပ်ထုတ်တွေ လွှင့်ပစ်လိုက်မှာစိုးလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
Wow says: အိမ်ရှင်းတာတော့မှန်မှန်ရှင်းပါတယ် စိတ်ကောင်းဝင်ရင်၊ ချက်တာလဲ အဲ့လိုပဲ စိတ်ကောင်းဝင်ရင် ချက်ပီး စိတ်ကောင်းမ၀င်ရင်မချက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: အဲ ဒီ စိတ် ပေါ့။
Wow says: စိတ်ကလဲ များသောအားဖြင့် ကောင်းတာဟုတ်ဖူးရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.